IWork, iMovie, kunye neGarageBand yeMac Yiya Simahla | Ndisuka mac
Ukusukela ngo-2013, ukucacisa ngakumbi ukusukela ngoSeptemba 2013, isuti yezicelo zeofisi iWork, iMovie kunye neGarageBand zakhululeka kubo bonke abo basebenzisi abathenga iMac entsha. Kwenzeka into efanayo nangeenguqulelo ze-iOS kwimeko yokufumana i-iPhone entsha. Le ntshukumo ye-Apple ibonakala ijolise ekwandiseni ukusetyenziswa kwezi zicelo phakathi kwabasebenzisi, usetyenziso oluthi, ngaphandle kwe-iWork, ngoku alunachasi kwiVenkile yeApple yeMac. Abafana baseCupertino babhengeze nje loo nto IWork, iMovie, kunye neGarageBand yeMac ikhululeke ngokupheleleyo kuye wonke umntu, kubandakanya bonke abo abasebenzisi abangakhange bahlaziye iMac yethu ukusukela ngoSeptemba 2013.
Bonke abo basebenzisi bengekayihlaziyi iMac yethu, kuye kwafuneka sihlawule ngesicelo ngasinye se- IWork € 19,99, € 14,99 ye-iMovie kunye ne- € 4,99 yeGarageBand. Okwangoku iphepha elisemthethweni leWork alikahlaziywa libonisa amaxabiso amatsha, kodwa kwiVenkile ye-Mac App sele ifumaneka simahla ngaphandle kokubonisa ixabiso eliboniswe apha ngasentla.
Asazi ukuba leliphi inyathelo elenziwe ngu-Apple malunga noku ngenxa, kodwa kusenokwenzeka ukuba siza kufumanisa kwiintsuku ezimbalwa. Asazi ukuba ngaba abafana baseCupertino baceba ukubhengeza inani elikhulu lezixhobo ezingasasebenziyo ngobusuku (zonke ngaphambi kowe-2013) okanye ukuba bayibonile ngokwenene indlela abayifumana ngayo imali kwezi zicelo zincinci kangangokuba ayihlawuli ukuba uqhubeke ubanikezela kwiVenkile ye-Mac App kwaye wayefuna ukuba neenkcukacha nabo bonke abalandeli benkampani kunye neemveliso zayo.
Okanye mhlawumbi, injongo yakho yeka ukuzihlaziya njengoko kwenzekile ngokuhamba komsebenzi kwi-iOSIsicelo emva kokuyithenga asisacwangcisi ukufumana uhlaziyo olutsha ngemisebenzi emitsha okanye amanqaku. Ixesha liza kuxela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » IWork, iMovie, kunye neGarageBand yeMac Yiya Mahala